Musharax Daahir Geelle oo caawa gurigiisa ku booqday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya - Home somali news leader
Home NEWS Musharax Daahir Geelle oo caawa gurigiisa ku booqday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya
Musharax Daahir Geelle oo caawa gurigiisa ku booqday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya
Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa caawa booqasho iskugu jirta salaan iyo xog-waraysi ugu tagay Madaxweynihii hore ee dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah golaha Musharaxiinta.
Kulankaan ayaa looga hadlay xaalada dalka iyo sidoo kale go’aamada Musharaxiinta Madaxweynaha.
“Madaxweynihi hore ee Soomaaliya Mudane Hassan Sheikh Mohamud ayaan caawa hoygiisa ku booqday, Salaan iyo is xog waraysi kadib waxaan madaxweynaha isla qiimaynay marxaladda kala guurka ah iyo arrimaha doorashooyinka dalka”ayuu yiri Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle.
Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka mid ah Musharaxiinta ugu cadcad xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Muddooyinkaanba waxaan Muqdisho ka waday kulamo iyo shirar aan kula kulmayay musuuliyiin dawladeed, siyaasiyiin, indheer garad iyo bulshada rayidka ah.
Daahir Maxamuud Geelle oo horay Wasiir laba jeer u soo noqday, Xildhibaan iyo Safiir ayaa ka mid ahaa Mas’uuliyiinta fara kutiska ah ee ka tagay la shaqeynta Madaxweyne Farmaajo ka dib markii uu iska diiday in loo adeegsado hanaan buunbuunin oo ka baxsan hanaanka dowladnimada.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ka qeybgalay shir ku saabsan aagga ganacsiga xorta ah ee Africa
Next articleGreat Britain, the EU joins more talks in the last press for Brexit agreement